Uyisebenzisa kanjani iFom C njengesixhobo esiShukumayo seBarre kwiGititar
Ngu-Hal Leonard Corporation, uJon Chappell, uMark Phillips, uDesi Serna
Sebenzisa ifom C njengesixhobo sokuhambisa esirhabaxa, umnwe wakho we-1 usebenza njenge-capo kwaye ulele ngapha ( imivalo ) intamo yekatala ngelixa iminwe yakho eseleyo yenza yonke imilo ye-chord.
Enye indlela yokufika kule minwe kukudlala i-chord eqhelekileyo evulekileyo, buyisela iminwe 1-2-3 ngo-2-3-4 (oku kubeka umnwe wakho wesi-4 ku-C kwi-3 fret yomtya wesi-5), tyibilikisa iminwe yakho phezulu ii-frets ezimbini, emva koko uthabathe ngaphaya kwe-2 fret ngomnwe wakho wokuqala. Amanani abonisa umnwe.
Ityala: Umzekeliso ngoncedo lukaDesi Serna
Xa yonke into isendaweni, lo milo ngokwenyani uba yinto ye-D. Umnwe wakho wesi-4 uphelela kwingcambu entsha ye-D kwi-5th fret yomtya wesihlanu.
Musa ukukhathazeka (akukho pun ejoliswe kuyo) ukuba le nto kunzima ukuyidlala. Lo milo unqabile, ukuba ukhe wasetyenziswa ngokupheleleyo. Endaweni yoko, iqhele ukwahlulwa ibe ziingceba ezincinci, ezinamagingxigingxi ngokulula. Nangona kunjalo, ukuqonda apho avela khona la maqhekeza, kufuneka uyazi ifom epheleleyo. Ke jolisa nje ekuboneni ubume beC form barre chord.
Ukuba unenkathazo, ungagcini ngokupheleleyo kwi-fingerboard ngomnwe wakho we-1. Imitya evulekileyo kuphela kwi-C chord yeyoku-1 neyesi-3, ke kuya kufuneka unqumle kuphela ngokwaneleyo ukugquma loo imitya xa ushukumisa imilo.
Slayida lo mfanekiso we-barre chord ujikeleze kwaye udlale i-chord yamanqaku ecaleni komtya we-5. Qaphela ukuba ingcambu ihlala iphantsi komnwe wakho wesi-4.
Unyango lwendalo lwe-salicylate sensitivity
i-atenolol vs metoprolol icala ebezingalindelekanga
irash ithatha ixesha elingakanani
yimalini ipakethe ye-az
Uhlela njani iividiyo kwi-mac